प्रभावकारी वा पत्रकार आउटरीचका लागि सही उपकरण Martech Zone
शुक्रबार, फेब्रुअरी 14, 2014 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
मेल्टवाटर हाम्रो ब्लगको लागि ठूलो प्रायोजक भएको छ। हामीले सामाजिक सुन्नेमा उनीहरूसँग एक अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनर गर्‍यौं जुन जाम प्याक गरिएको थियो र यसको ठूलो प्रतिक्रिया थियो। र हामी उनीहरूको साथ हाम्रो पहिलो इन्फोग्राफिक रिलिज गर्न तयार छौं! प्रायोजकहरू क्रमशः परम्परागत र सामाजिक सुन्नका लागि उनीहरूको समाचार र बज उत्पादनहरूमा केन्द्रित छन्, तर म सार्वजनिक समाचार व्यवसायीहरूको लागि उनीहरूको समाचार उत्पादनको एक पक्ष प्रस्तुत गर्न चाहान्छु जुन मेरो जीवनलाई एक रूप बनाउँछ। प्रभाव एक टन सजिलो ...
म सार्वजनिक सम्बन्ध पेशेवरहरूबाट प्राप्त गर्ने धेरै जसो पिचहरू उनीहरूको व्यक्तिगत ठेगानाबाट आउँदछन् र ब्याच र ब्लास्ट इरेन्टहरू हुन् जुन मेरो इनबक्समा अवरुद्ध छन्। यी व्यक्तिहरूले परम्परागत पीआर लुकअप उपकरणहरू प्रयोग गर्छन् जुन मेरो ईमेल ठेगाना सूचीबद्ध गर्दछ र उनीहरू मबाट बाहिर बकवास गर्दछन्। तिनीहरू कसरी बुझ्दैनन् एक ब्लगर पिच गर्नुहोस् र म विश्वस्त छु पत्रकारहरु लाई आफ्नो कार्यनीति भन्दा कम।
म गरीब वा अप्रासंगिक पिचहरूमा व्यक्तिलाई। मिनेट लिन को लागी कुरो प्रतिक्रिया गर्छु मेरो सामग्री उनीहरूको ग्राहकसँग प्रासंगिक छ कि भनेर हेर्न। मलाई लाग्दैन कि उनीहरू मध्ये धेरैले त्यसो गरे पछि उनीहरू हतारमा थिए र उनीहरूले सोच्दैनन् कि त्यहाँ उनीहरूका कार्यहरूका लागि प्रतिक्रियाहरू छन्। तर त्यहाँ छन्। म जस्तो मान्छेहरूले तुरुन्तै तिनीहरूलाई रद्दीको रूपमा रिपोर्ट गर्छन् ताकि हामी हाम्रो इनबक्समा अर्को पिच कहिल्यै देखेनौं। त्यो पीआर व्यक्तिको लागि साँच्चिकै दुर्भाग्य छ - जसको एक दिन हाम्रो ब्लगको लागि ठूलो पिच हुन सक्छ।
हिजो, मैले पीआर एजेन्सीको प्रयोगबाट पिच ईमेल प्राप्त गरें मेल्टवटरको PR आउटरीच उपकरणहरू। म प्रेषकलाई उल्लेख गर्ने छैन किनकि तिनीहरू प्रासंगिक थिएनन् - तर ईमेल ग्राफिक्सको साथ HTML हो र यसमा संसारमा उत्तम विकल्प थियो - एक सदस्यता रद्द गर्नुहोस्। त्यो लिंक क्लिक गर्दा, मलाई अर्को स्क्रिनमा ल्याइएको थियो:
वाह, यी पिचहरू वा पूरै मिडिया डाटाबेसबाट सदस्यता समाप्त गर्नको लागि विकल्प! त्यो शक्तिशाली, पारदर्शी छ र पीआर एजेन्सी र मेल्टवॉटर जिम्मेवार जो कोहीलाई आफ्नो प्रणाली दुरुपयोग गर्न जिम्मेवार छ। अझ रमाईलो पनि मेल्टवटरबाट आएको ईमेलको विकल्प हो वा तपाईंको ईमेल सेवामा रुट गरिएको। यो उत्तरदायित्वको एक अतिरिक्त स्तर हो किनकि प्राय जसो ईमेल क्लाइन्टहरूले ईमेल ठेगानाहरू स्वचालित तवरले वा तिनीहरूलाई ब्लक गर्न को क्षमता प्रदान गर्दछ।
यदि तपाइँ एक पेशेवर सार्वजनिक सम्बन्ध वा आउटरीच एजेन्सीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँको टोली सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ (जसरी हुनुपर्दछ) र उनीहरुलाई उत्तरदायी राख्नुहोस्, यो यस्तो प्रकारको उपकरण हो जसलाई तपाईलाई पुग्न पुर्‍याउनु पर्छ। उल्लेख गर्नु हुँदैन मेल्टवाटरसँग तिनीहरूको डाटाबेसमा ,350,000 XNUMX०,००० भन्दा बढी मिडिया सम्पर्कहरू छन् तपाइँलाई सही प्रभावकारहरू र पत्रकारहरू फेला पार्न मद्दतको लागि प्रत्येकमा जानकारीको एक टनको साथ।
प्रकटीकरण: यो पोष्ट मेल्टवाटर द्वारा याचना गरिएको थिएन, यो सबै मलाई थियो।
टैग: पिचपिच ईमेलपिचिंग प्रभावकर्ताहरूपत्रकार पिच गर्दैprसार्वजनिक सम्बन्ध